ဌန်ဖြစ်စဉ်ကို: သင်၏ HARD DRIVE ကို DEFRAGMENT - HARD DISK ကို - 2019
သင်သည်သင်၏ hard disk ကို defragmenting အကြောင်းကိုသိရန်လိုအပ်ပါအားလုံး
disk defragmenter စ - အဓိကအားဖြင့် Windows ကိုပိုကောင်းအောင်အသုံးပြုကြသည်ထားတဲ့ဖိုင်တွေ၏အပိုင်းအစများသို့ကျိုးပဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးနေတဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်း။ နီးပါးကို PC အရှိန်မြှင့်အပေါ်တိုင်းဆောင်းပါးကောင်စီအကငျြ့ Defragmentation တွင်တွေ့နိုင်ပါသည်။
သို့သော်အားလုံးမဟုတ်အသုံးပြုသူများကို Defragmentation သောအရာကိုနားလည်သဘောပေါက်နှင့်ထိုသို့ပြုမှလိုအပ်သောသည်အဘယ်အရာကိစ္စများတွင်သိနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်မဟုတ်ကြဘူး; အဘယ်အရာကို software ကိုဒီအတှကျအသုံးပွုသငျ့ပါတယျ - Built-in utility ကိုလုံလောက်, သို့မဟုတ်ပါကတစ်ဦး Third-party program ကို install သာ. ကောင်း၏ရှိမရှိ။
disk defragmenter စကဘာလဲ
disk defragmenter စ Making, များစွာသောအသုံးပြုသူများကပင်စဉ်းစားကြဘူးသို့မဟုတ်ကအားလုံးကိုအကြောင်းအဘယ်အရာကိုထွက်ရှာရန်ကြိုးစားပါဘူး။ အဖြေ "Defragmentation" ၏ခေါင်းစဉ်တွင်တွေ့နိုင်ပါသည် - တစ် hard disk ကိုမှရေးသားခြင်းအခါဖိုင်တွေပေါင်းစပ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုအပိုင်းအစများသို့ကျိုးပဲ့ခဲ့သည်။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအောက်က image ကိုဖိုင်တစ်ဖိုင်၏လက်ဝဲအပိုင်းအစများဗလာနေရာများနှင့်ခွဲခြင်းမရှိဘဲ, လက်ျာကိုအပိုင်းပိုင်း၏ပုံစံအတွက်သင့် hard drive ကိုဖြတ်ပြီးအရပ်ရပ်သို့ကွဲပြားတူညီတဲ့ဖိုင်ပေါ်တွင်, စဉ်ဆက်မပြတ်စီးမှတ်တမ်းတင်ထားသောကြောင့်ပြသထားတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်, အများကြီးပိုလွယ်မောင်းနှင့်ဖတ်ပါတဲ့စဉ်ဆက်မပြတ် file ကိုပိုမိုမြန်ဆန်, တစ်ဦးအချည်းနှီးသော space ခြားပြီးထက်နှင့်အခြားဖိုင်များ။
အဘယ်ကြောင့် HDD အကွဲကွဲအပြားပြားဖြစ်ပြီး
hard drives အချက်အလက်များ၏အချို့သောငွေပမာဏကိုသိမ်းထားနိုင်ပါတယ်အသီးအသီးသောအကဏ္ဍများ၏ရေးစပ်နေကြသည်။ တစ်ဦး hard drive ကိုတဦးတည်းကဏ္ဍတွင် fit မနိုင်ကြောင်းကြီးမားတဲ့ file တွေကိုသိုလှောင်ထားသည်ဆိုပါကမျိုးစုံကဏ္ဍများ၌ဝေဖန်နှင့်သိမ်းဆည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။
အိမ်နီးချင်းကဏ္ဍများတွင် - ပုံမှန်အားဖြင့်စနစ်ကအမြဲတမ်းတစ်ဦးချင်းစီကတခြားမှတတ်နိုင်သမျှနီးစပ်ဖိုင်အပိုင်းအစများရေးသားဖို့ကြိုးစားပါတယ်။ သို့သော်ကြောင့်ဖယ်ရှား / စတိုးဆိုင်ကတခြားဖိုင်များ, ပြီးသားကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏ဖိုင်တွေနဲ့အခြားလုပ်ငန်းစဉ်များအရွယ်အစားကိုချုံ့နေဆဲအမြဲတစ်ဦးချင်းစီကတခြားကပ်လျက်အလုံအလောက်အခမဲ့ကဏ္ဍများမဟုတ်ပါဘူး။ ထို့ကြောင့်, က Windows HDD ၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများထဲတွင်ဖိုင်စံချိန်လွှဲပြောင်း။
ဘယ်လိုအကွဲကွဲအပြားပြား drive ကိုမြန်နှုန်းအပေါ်သက်ရောက်မှု
သင်မှတ်တမ်းတင်ထားသောဖိုင်တွင်ဖွင့်လှစ်ဖို့လိုတဲ့အခါစိတ်စိတ်အမွှာမွှာဖြစ်ပါသည်, hard disk ကိုဦးခေါင်းကသိမ်းပြီးပါပြီရှိရာသူတို့အားကဏ္ဍများတွင်တသမတ်တည်းရွှေ့မည်။ ထို့ကြောင့်သူကဖိုင်ရဲ့အပေါငျးတို့သအပိုင်းပိုင်းကိုရှာဖွေရန်ကြိုးပမ်းမှုအတွက် hard drive ကိုပေါ်ရွှေ့ဖို့ရှိပါတယ်ပိုမိုအချိန်, ဘတ်ရွတ်နှေးကြလိမ့်မည်။
လက်ဝဲအပေါ်ပုံတွင်အပိုငျးပိုငျးသို့ကျိုးပဲ့ဖိုင်များကိုဖတ်ရှုဖို့ hard drive ကို၏ဦးခေါင်းကိုစေရန်လိုအပ်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်ဘယ်လောက်လှုပ်ရှားမှုပြသထားတယ်။ ညာဘက်အပြာနှင့်အဝါရောင်အဆင်းအရောင်နှင့်မှတ်သားနှစ်ဦးစလုံးဖိုင်များ, ကိုသိသိသာသာ disc ကိုရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာလှုပ်ရှားမှုပမာဏကိုလျော့ကျစေပါတယ်သောအဆက်မပြတ်မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။
Defragmentation - ကပ်လျက်ကဏ္ဍများမှာတည်ရှိပါတယ်အကွဲကွဲအပြားပြား၏ခြုံငုံရာခိုင်နှုန်းအပေါင်းတို့နှင့်တကွ, ဖိုင်တွေ (ဖြစ်နိုင်လျှင်) လျှော့ချရန်အဖြစ်ဒါတစ်ခုတည်းဖိုင်အပိုင်းပိုင်း၏ပြန်စီစဉ်၏လုပ်ငန်းစဉ်။ ဒီစာဖတ်မှတဆင့်အပြုသဘော HDD မြန်နှုန်းအပေါ် impact တံ့သော, စဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်ပေါ်ပါလိမ့်မယ်။ ကြီးမားတဲ့ file တွေကိုဖတ်နေတဲ့အခါဒီအထူးသဖြင့်သိသာသည်။
ဒါကြောင့် defragment တစ်ခု Third-party ပရိုဂရမ်ကိုအသုံးပြုမှအသိပါစေပါသလား
developer များ Defragmentation နှင့်အတူကိုင်တွယ်ပရိုဂရမ်၏ကြီးမားသောအရေအတွက်ကဖန်တီးခဲ့ကြသည်။ ဒါဟာအသေးအစီအစဉ်များ, defragmenter စများနှင့်ရှုပ်ထွေးသည့်စနစ် optimization ပလီကေးရှင်းသူတို့ကိုခရီးဦးကြိုပြုခြင်းအဖြစ်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ အခမဲ့နှင့် paid ရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့သူတို့လိုအပျသလဲ
Third-party utilities ၏ထိရောက်မှုကိုဆုံးဖြတ်ရန်, သင်တန်း, ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ပါတယ်။ ကွဲပြားခြားနားသော developer များအနေဖြင့် Programs ကိုပူဇော်နိုင်သည်
ကိုယ်ပိုင် setting များကို Avtodefragmentatsii ။ အသုံးပြုသူကိုပိုပြီးပြင်သာပြောင်းသာသင့်ရဲ့အချိန်ဇယားကိုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းစီမံနိုင်သည်;
ဖြစ်စဉ်အချို့သည် algorithms ။ Third-party software များအတွက်အဆုံးတွင်ပိုမိုအမြတ်အစွန်း, ကိုယ်ပိုင်ဝိသေသလက္ခဏာများရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, သူတို့ defragmenter စ run ဖို့ရာခိုင်နှုန်းက HDD ပေါ်လျော့နည်းအာကာသလိုအပ်သည်။ အပြိုင်ဖိုင် optimization ထွက်သယ်ဆောင်, သူတို့ရဲ့ download speed ကတိုးမွှငျ့။ ဒါ့အပြင်အကွဲကွဲအပြားပြားအဆင့်ကိုတဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်ရှေ့ဆက်ဖို့နေရာလွတ်ပမာဏ၏တစ်ဦးအသင်းအဖွဲ့, သည်ရှိ၏,
ထိုကဲ့သို့သော registry ကို defragmenting အဖြစ်အပိုဆောင်း features တွေ။
၏သင်တန်း, အစီအစဉ်များ၏လုပ်ငန်းဆောင်တာဆော့ဖ်ဝဲရေးသားသူအပေါ်မူတည်ပြီးကွဲပြားဒါကြောင့်အသုံးပြုသူ၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များကိုနှင့် PC ကို၏ဖြစ်နိုင်ခြေအပေါ်အခြေခံပြီး, tool ကို select လုပ်ပါရန်လိုအပ်ပါသည်။
ငါပုံမှန် disk defragmenter စထွက်သယ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သလား
Windows ကိုအားလုံးလက်ရှိဗားရှင်းစီစဉ်ထားအပတ်စဉ်လုပ်ငန်းစဉ်၏အလိုအလျှောက်ကျင်းပနိုင်ရန်ကိုဆက်ကပ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ကလိုအပ်သောထက်ပိုအသုံးမကျဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်ဆက်မပြတ်လိုအပ်ဖြစ်ဖို့အသုံးပြုဟောင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် - အစိတ်စိတ်အမွှာမွှာကွဲပြားသူ့ဟာသူဆိုတဲ့အချက်ကို။ အတိတ်ကာလများတွင်ပင်အနည်းငယ်အကွဲကွဲအပြားပြားမှုစနစ်စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။
ခေတ်သစ် HDD တစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားမြန်နှုန်းရှိသည်, Operating System ကိုသစ်ကိုဗားရှင်း "စမတ်" အများကြီးဖြစ်လာကြပါပြီ, ဒါကြောင့်ပင်အသုံးပြုသူ၏အကွဲကွဲအပြားပြားတစ်အချို့သောလုပ်ငန်းစဉ်မြန်နှုန်းအတွက်ကျဆင်းခြင်းသတိထားမိမည်မဟုတ်ပါ။ သငျသညျကြီးမားတဲ့စွမ်းရည် (အထကျ 1TB နှင့်) အတူ hard drive ကိုအသုံးပြုတယ်ဆိုရင်ဒါဟာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုထိခိုက်စေမည်မဟုတ်ဒါကြောင့်နှင့်အညီ, စနစ်ကြီးမားတဲ့ဖိုင်တွေကအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြန့်ဝေနိုင်ပါတယ်။
ထို့အပြင်စဉ်ဆက်မပြတ်ပြေး defragmenter စ disk ကိုဘဝ shortens - ဤအကောင့်ထဲသို့ယူထိုက်သည်ဖြစ်သောအရေးပါသောချို့ယွင်းချက်ဖြစ်ပါသည်။
Windows ကို Defragmentation ရှိတဲ့ default enabled ကြောင့်, ကကိုယ်တိုင်ပိတ်ထားရပါမည်:
သွားပါ "ဒီကွန်ပျူတာ"အဆိုပါ drive ကို right-click နှိပ်ပြီး select လုပ်ပါ "Properties ကို".
tab ကိုသို့ပြောင်းရန် "ဝန်ဆောင်မှု" နှင့်အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်ပါ".
စာနယ်ဇင်းများတွင် "ပြောင်းလဲခြင်း Settings" ကို.
Uncheck "(အကြံပြုသည်) တစ်ဦးအချိန်ဇယားအပေါ် Run" နှင့်အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "အိုကေ".
ငါ SSD ကို disk defragmenter စလိုအပ်ပါသလား
Solid-state drives အသုံးပြုအသုံးပြုသူများအတွက်အလွန်ဘုံအမှား - ဆို defragmenter စကိုသုံးနိုင်သည်။
ကိုသတိရပါ, သင်သည်သင်၏ PC ဒါမှမဟုတ် Laptop ကိုအပေါ်တစ်ဦး SSD ကို drive ကိုရှိပါက, မည်သည့်ကိစ္စတွင် Defragmentation လုပ်ဆောင်ကြဘူး - ဒီအလွန် drive ပေါ်တွင်ဝတ်ဆင် accelerates ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ထိုကဲ့သို့သောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအဆိုပါ SSD ကို၏အမြန်နှုန်းတိုးမြှင့်မပေးပါဘူး။
သငျသညျကို Windows ပေါ်မှာ Defragmentation ပိတ်ထားကြပြီမဟုတ်ခဲ့လျှင်, သေချာသင်သို့မဟုတ်အားလုံး disk တွေအဘို့, ဒါမှမဟုတ် SSD ကိုသာမှလုပ်ပါစေ။
ညွှန်ကြားချက်အထက်တွင်ပြီးတော့ထံမှခြေလှမ်းများ 1-3 Repeat ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ကိုရွေးချယ်ပါ".
လာမယ့်တစ်ဦးအချိန်ဇယားအပေါ် Defrag ချင်နိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသော HDD, ရန်အကွက်ကို Check နှင့်အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "အိုကေ".
အဆိုပါ Third-party utilities, ထိုကဲ့သို့သောဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုကိုလည်းလက်ဆောင်ဖြစ်ပါသည်, သို့သော် setup လုပ်ငန်းစဉ်မတူညီတဲ့ရလိမ့်မည်။
အသုံးပြုသူအနေဖြင့်အဘယ်သူမျှမလှုပ်ရှားမှုလည်းမရှိသည့်အခါကိုအကောင်းဆုံးရလဒ်တွေကိုသူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးကို run, သို့မဟုတ်ပါကနိမ့်ဆုံးပမာဏကို (သီချင်းနားထောင်တဲ့အခါမှာဥပမာတစ်ချိုးသို့မဟုတ်) အခါအောင်မြင်ရန်အလို့ငှာ, နောက်ခံအလုပ်လုပ်ကြောင်း defragmenter စနိုင်ခဲ့ဆိုတဲ့အချက်ကိုနေသော်လည်း;
စနစ်တကျတစ်ချိန်တည်းမှာလျင်မြန်စွာနည်းလမ်းများအဓိကဖိုင်တွေနဲ့စာရွက်စာတမ်းများမှဝင်ရောက်ခွင့်အရှိန်မြှင့်ပေမယ့်ဖိုင်တစ်အချို့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကိုသုံးရန်လုပ်ငန်းများ၌မည်မဟုတ်ပါသည် Periodic Defragmentation ပို့ချပါတယ်။ ဤကိစ္စတွင်အတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေကိုဖြည့်, သင်လျော့နည်းလုပျနိုငျ;
ဒါကြောင့်အပြည့်အဝ Defragmentation များ၏ရှေ့မှောက်၌ Junk ဖိုင်များကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါနှင့်ဖြစ်နိုင်လျှင်, ဖိုင်တွေရဲ့ကိုင်တွယ်ဖယ်ရှားပစ်ရန်အကြံပြုသည် pagefile.sys နှင့် hiberfil.sys။ အဲဒီနှစျခုဖိုင်တွေယာယီစီစနစ်က startup နှင့်အတူ recreated အဖြစ်အသုံးပြုနေကြသည်;
အဆိုပါအစီအစဉ်ဖိုင်ကိုစားပွဲပေါ်မှာ defragment လုပ်ဖို့စွမ်းရည် (MFT) ဆိုတာနှင့် system ဖိုင်တွေရှိပါတယ်လျှင်သင်ကလစျြလြူရှုသင့်ပါဘူး။ ပုံမှန်အားဖြင့်, ဒီ function ကို operating system ကို run နေသည့်အခါမရရှိနိုင်, နဲ့ Windows စတင်သည်ရှေ့တော်၌ reboot ပြီးနောက်ထွက်သယ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
ဘယ်လို defragment လုပ်ဖို့
အခြားဆော့ဖ်ဝဲရေးသူကနေ utility ကိုတပ်ဆင်, သို့မဟုတ် built-in operating system ကိုဆော့ဖျဝဲကိုအသုံးပြုဖို့: Defrag နှစ်ခုအခြေခံနည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။ သငျသညျ built-in နိုင်ပါတယ်မသာ drives တွေကိုတစ်ချိန်တည်းမှာပိုကောင်းအောင်, ဒါပေမယ့်ကို USB ကနေတစ်ဆင့်ချိတ်ဆက်ပြင်ပ drives တွေကို။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲ့ site တွင်ပြုလုပ်ခုနှစ်တွင် Windows7ဥပမာပေါ်တွင် Defragmentation တစ်ခုညွှန်ကြားချက်ကိုသင်လူကြိုက်များ program ကိုတစ်ခုလမ်းညွှန်နှင့်စံသည် Windows-utility ကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်ရှိသေး၏။
ပိုများသော: Windows ပေါ်မှာနည်းလမ်းများ disk defragmenter စ
တစ်ဦး solid state drive (SSD) ကို defragment မထားပါနဲ့။
Windows တွင် Startup စာမျက်နှာကို Defrag အချိန်ဇယားကိုပိတ်ထားပါ။
ပထမဦးစွာဆန်းစစ်ပြု Defragmentation လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်ကြောင်းလည်းမရှိရှိမရှိထွက်ရှာပါ။
ဖြစ်နိုင်လျှင်အဘယ်သူ၏ထိရောက်မှု built-in Windows ကို-utility ကို ပို. မြင့်မားသည်အရည်အသွေးမြင့်ပရိုဂရမ်ကိုအသုံးပြုပါ။